Ogaden News Agency (ONA) – Banaanbax Balaadhan oo lagu qabtay Perth oy ka hadleen xubnaha baarlamaanka Australia
Banaanbax Balaadhan oo lagu qabtay Perth oy ka hadleen xubnaha baarlamaanka Australia
Maalinimadii Arbacada 14/5/14 ayaa Jaaliyada S.Ogadenia iyo Jaaliyada Oromia ee Perth mudaharaad aad balaadhan oo xukumada wayaanaha lagaga soo horjeedo ku qabateen aqalka baarlamaanka hortiisa (Parliament House ). Banaanbaxayaasha oo aad u tiro badnaa ayaa lulayay calamada labada qoomiyadood iyo boodhadh.
Banaanbaxan ayaa lagaga soo horjeeday tacadiyada iyo gumaadka naxariisdarada ah ee xukumada Ethiopia kula dhaqmayso ardayda iyo dad waynaha Soomaalida Ogadenia iyo Oromada. Banaanbaxan ayaa aad u soo jiitay saxaafadii goobta joogtay iyo dhamaan dadwayhii kale.
Hadaba banaanbaxayaashan ayaa cabashadooda u gudbiyay dawlada Australia iyo haayadaha xuquuqul insaanka, iyagoo ka codsaday in ay ka joojiyaan dhaqaalaha la siiyo xukumada Ethiopia kaas ooy ku gumaadaan shacabiga Ogadeniya iyo Oromada.
Waxaa banaanbaxan ka hadlay xubno paarlamaanka ka tirsan oo kala ah Margaret Quirk iyo Janine Freeman. Iyaga oo sheegay inay dawlada Australia u gudbiyaan fariintooda, dawlada Australiana ay is dhab ah air tan biniaadanimada kabaxsan u eegaan.
Mudaharaadkan oo socday dhawr sacadood ayaa ugu danbayntii ku dhamaaday guul iyo jawi wanaagsan.
Kala soco ONA muuqaalada mudaharaadkan insha’Allah.